'Mortal Kombat' သည်အပြစ်အနာအဆာကင်းသောအောင်ပွဲတစ်ခုရရှိစေသည် - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း 'Mortal Kombat' သည်အပြစ်ကင်းသောအောင်ပွဲကိုရရှိသည်
Mortal Kombat ဤအချက်မှာမော်လီကျူးအဆင့်တွင်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Arcade မှာစတင်ခဲ့တာကစပြီးဂိမ်းစက်တွေမှာအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ရန်ပွဲအထိ၊ ဒီဂိမ်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအချိန်တော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့်ဂရပ်ဖစ်များသည်တော်လှန်ရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့်၎င်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် Mortal Kombat ဒီရူးသွပ်၊ ပျော့ဖတ်နှင့်ကွန်ဖူးတော်လှန်ရေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင် Mortal Kombat.
James Wan ၏ Atomic Monster Productions နှင့် Warner Bros. တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်လိုက်လျောညီထွေမှုကိုတင်းကျပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကန ဦး အစီရင်ခံစာများမှဤ Mortal Kombat သည်ဂိမ်း၏အနှစ်သာရကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ အမည်အားဖြင့်၎င်းသည်သေဆုံးမှုများ၊ ဂိုးနှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏ပုံသဏ္properlyာန်ကိုမှန်ကန်စွာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစောင့်ဆိုင်းရှည်လျားကြီးနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိတိုယိုတာနောက်တွဲယာဉ်ကတိပေးခဲ့ကြသည်။ ဒီတော့ရုပ်ရှင်ကတကယ်ကိုကယ်လွှတ်ခဲ့တာလား။
အဆိုပါ uninitiated သည် Mortal Kombat ငါတို့ကမ္ဘာ၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖန်တီးခဲ့သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Earth Realm မှပြိုင်ပွဲများစွာကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက်လူကောင်းများသည်နောက်ဆုံးတွင်ရှုံးသည်။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာရာစုနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးတိုက်လေယာဉ်တွေကိုစုရုံးနိုင်ခဲ့ပြီး Outworld ထဲကမကောင်းသောတိုက်ခိုက်သူများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည်။
လောင်းကြေးသည်ဤရုပ်ရှင်ထဲတွင်မြင့်မားသည်။ အကယ်၍ Earth Realm သည်ပြိုင်ပွဲနောက်တစ်ခုထပ်မံကျသွားလျှင်ကမ္ဘာကြီးသည်အမှောင်ထုထဲကျသွားလိမ့်မည်။ ၂၀၂၀ ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး ။
ဒါက Lord Raiden (Tadanobu Asano) ကို Avenger's assemble style ထပ်မံတည်ဆောက်ရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်။ အပိုင်းအစတွေဒီမှာအတူတကွလာတာကိုကြည့်ရတာပရိသတ်တစ် ဦး အနေနဲ့တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည်ဟုခံစားရခြင်းမဟုတ်၊ အလျင်စလိုမြန်သည်ဟုမခံစားရသောသေးငယ်သောပုံပြင်များကိုသင်ကြည့်နေသည်။ လူတိုင်း၏ဇာတ်လမ်းသည်အော်ဂဲနစ်နှင့်ကောင်းမွန်စွာဆောက်လုပ်ထားသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Cole Young (အသစ်ရောက်ရှိလာသော)Lewis Tan) ။ သူဟာတိုက်လေယာဉ်အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့လာပါတယ်။ သူကဗီဒီယိုဂိမ်းမှာလုံးဝမတွေ့ရဘူး။ လူငယ်အခြေခံအားဖြင့်ဒီမှာပရိသတ်ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူ၏မျက်လုံးများအားဖြင့်ဤရူးကမ္ဘာသို့မိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ Young သည်ကောင်းမွန်သောဗဟိုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူငယ်သည်ပိုကြီးသည့်ရုပ်ပုံတွင်မည်သည့်အပိုင်းကိုကစားမည်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စောင့်စားခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
ငါတို့ချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီမှာရှိတယ်။ Scorpion မှ Sub-Zero၊ Kung-Lao မှ Mileena အထိဖြစ်သည်။ အဆိုပါတန်းစီဇယားကိုသူတစ် ဦး ရဲ့ - သူသည်၏ Mortal Kombat။ ဒါရိုက်တာ Simon McQuoid သည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစွာချမှတ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုဓာတုဗေဒသည်အရိုးများကျိုးပဲ့သောထိုတိုက်ပွဲများသည်မည်သည့်စက္ကန့်မဆိုထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်ကိုသိရန်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
တကယ့်ဗီဒီယိုဂိမ်း cutscenes များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်များပြားသော pulpy တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများရှိသည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းဖြတ်တောက်ခြင်းမြင်ကွင်းများနှင့် ၇၀ ကျော်ကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ရွှင်လန်းဖွယ်ချိုမြိန်မှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ထိုအသံသည်ပင်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးဖလှယ်မှုပုံစံသို့ရောက်သွားသည်။ ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဂိမ်းစီးရီး၏ ၁၀၀ ရာနှုန်းကိုထင်ဟပ်စေသောရုပ်ရှင်ရှိအရာအားလုံးနှင့်လက်ချင်းယှဉ်။ လုပ်ဆောင်သည်။ McQuoid ရဲ့ Mortal Kombat တစ်ပြားတစ်ချပ်နှင့်သွေးထွက်သံယိုပေါင်အတွက်ဝင်။
Hanzo Hasashi / Scorpion နှင့် Bi-Han / Sub-Zero အကြားအလယ်ဗဟိုသည်ပွဲကြည့်စင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်ဤလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူနှစ် ဦး အကြားထာဝရမုန်းတီးမှုဖြစ်လာနိုင်သည့်အစ၏မူလဇာတ်လမ်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ခုကြားမှာသရုပ်ဆောင်စွမ်းအားကအားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့ဒဏ္endာရီကိုယ်ခံပညာနှင့်သရုပ်ဆောင်များကို၏ဂျိုး Taslim နှင့်ဆက်ဆံနေကြသည် အဆိုပါဝင်ရောက်စီးနင်း ကျော်ကြားမှုနှင့်၏ Hiroyuki Sanada Shogun ဆာမူရိုင်း ကျော်ကြားမှု။ သရုပ်ဆောင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကောင်းစွာရွေးချယ်ထားခြင်းခံရသည်။ သင်းအုပ်ဆရာအခွံမာသီးများသည်ဤပြသမှုနှစ်ခုကိုဤအလင်းရောင်တွင်တွေ့မြင်ရန်အထူးသဖြင့်ပြပွဲသို့လာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့စိတ်မပျက်စေဘူး။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်မမျှော်လင့်သောအိပ်ပျော်နေသူသည်ပြသမှုကိုခိုးယူသူ Kano (Josh Lawson) နှင့်အမှန်အကန်ဖြစ်သည်။ နဂါးနက်သည်ရှေ့နှင့်အလယ်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့သို့နှင့်အလယ်သို့သွားသောလမ်းစဉ်ကိုတသမတ်တည်းဟီလာရီဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တွန်းပို့သည်။ Lawson ကရယ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရိုက်လိုက်တယ်။ Kano ၏အများကြီးပိုကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Mortal Kombat ငါသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ထက်။ ဒါပေမယ့် Lawson ရဲ့ Kano နဲ့အတူအချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ကြေးနန်းဟာကြင်နာတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်လုံးဝချစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်သူ့ဟာသူအကြောင်းကိုဟာသရှိပါတယ်။ ဒါဟာပျော်စရာအကြောင်းပျော်စရာပါပဲ Mortal Kombat။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်သူသည်သူမအပေါ်လှည့်ပတ်သွားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိသည်။ သူမတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုနောက်ထပ်တစ်လှည့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူက“ မင်းသိတဲ့တစ်ခုတည်းသောလှုပ်ရှားမှုလား” ဟုပြန်ဖြေသည်။ အခန်းတစ်ခန်းထဲကိုတစ်ယောက်ယောက်ဘယ်နှစ်ခါဝင်ခဲ့တာလဲ Mortal Kombat ပြီးတော့မင်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးသင်ဂိမ်းကစားနေချိန်မှာတစ်နည်းနည်းနဲ့အနိုင်ရမှဘာမှမလုပ်ဘူးလား။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်များသည်ကွန်ဖူးဆိုးရွားမှုနှင့်မူလဇာတ်လမ်းများကိုခွဲခြမ်းရန်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်များဖြစ်သည်။
McQuoid သည်ကျယ်ပြန့်သောစကြာ ၀ forာအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ ရုပ်ရှင်၏နိဂုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ Earth Earth နှင့် Outworld သို့ပြန်လည်လည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းရှင်းနေပါသည်။ မကြာသေးမီကသတင်းများအရ၊ အကယ်၍ ဒီရုပ်ရှင်ရုံတွင်အောင်မြင်မှုရရှိပါကပါ ၀ င်သည့်သရုပ်ဆောင်အချို့သည်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်လေးခုအတွက်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်သည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီစီးရီးပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်ရန်ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးဆက်လက်ကြီးထွားရန်နေရာလည်းရှိသည်။
ယခင် Mortal Kombat ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာပျော်စရာကောင်းသောနည်းပညာစီးနင်းမှုဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပြီး CG FX ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အလွန်နည်းသည်။ Plus အား, ရုပ်ရှင်အပေါ်မကယ်မလွှတ်ခဲ့ပါ Mortal Kombat ရဲ့ ပေါင်မုန့်နှင့်ထောပတ် ... သေဆုံးမှု။ သူတို့ကအဲဒီမှာမရှိဘူး။ ဒီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုမှာသေဆုံးမှုဟာအဓိကကျကြောင်းအစောပိုင်းကတည်းကကျနော်တို့သိခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကတန်းတူဖြစ်သွားမလား။ အတိုချုပ်အဖြေလုံးဝ! FX အဖွဲ့နှင့် McQuoid တို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုခွဲထုတ်ရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားခွဲစိတ်ရန်လာသောအခါမည်သည့်ထိုးနှက်ချက်ကိုမှဆွဲထုတ်ခြင်းမရှိသောအထူး alchemy မျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤရုပ်ရှင်၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့်ပြည့်စုံသို့သွားသောအသေးစိတ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာကြီးမားသည်။ Practical နှင့် CG FX တို့ပေါင်းစပ်ပြီးခမ်းနားထည်ဝါသောဂိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဖွဲ့သည်သူတို့၏ပရိသတ်ကိုသိသည်မှာသေချာသည်။
Mortal Kombat ပုလင်းထဲမှာ gory လျှပ်စီးဖမ်းယူ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကလိုပဲတွေးမိခဲ့မိတယ်၊ Mortal Kombat ဂိမ်းနှင့်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်စွာသေဆုံးမှုပို့ဆောင်။ McQuoid နှင့်အဖွဲ့သည်သူတို့၏အသွေးနှင့်ထောပတ်ကိုသိပြီးပရိသတ်အတွက်ဘာကိုသိသည် Mortal Kombat တက်သည်ကိုပြသလိမ့်မယ်။ ဂိုး၊ ကွန်ဖူးနှင့်ညိတ်ညိတ်ခြင်းများသည်ပေါင်းစပ်။ ပေါင်းစပ်လိုက်သည်၊ မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုရင် Mortal Kombatအပြစ်ကင်းစင်သောအောင်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
Mortal Kombat ပြဇာတ်ရုံများနှင့် HBO Max ကိုAprilပြီလ ၂၃ ရက်တွင်စတင်လွှင့်သည်။
Hulu ၏ MODOK နောက်တွဲယာဉ်မှာ Patton Oswat ကို၎င်း၏ဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်နှင့် Jon Hamm ကို Iron Man အဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အနုမြူနဂါး Productionsဂျိမ်းစ်ဝမ်ဂျိုး TaslimKanoMortal Kombatကင်းမြီးကောက်Shang-Tsungရှိမုန် McQuiodသုည
'Creepshow' ရာသီ ၂ အပိုင်း ၄ ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ